စင်ကာပူနှင့် သြစတြေးလျနိုင်ငံ ဆစ်ဒနီရှိ Curtin University များမှ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးများ လျှောက်ထားရယူနိုင် | The Ladies
Home » စင်ကာပူနှင့် သြစတြေးလျနိုင်ငံ ဆစ်ဒနီရှိ Curtin University များမှ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးများ လျှောက်ထားရယူနိုင်
စင်ကာပူနှင့် သြစတြေးလျနိုင်ငံ ဆစ်ဒနီရှိ Curtin University များမှ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးများ လျှောက်ထားရယူနိုင်
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး တက္ကသိုလ်ကြီးများ ၃၀၀ စာရင်းဝင် သြစတြေးလျ အနောက်ပိုင်း၏ အကြီးဆုံးနှင့် သြစတြေးလျ တက္ကသိုလ်များတွင် တတိယ ကျောင်းသားအများဆုံး တက်ရောက်လျက်ရှိသော Curtin University မှ ၎င်း၏ ကျောင်းခွဲများဖြစ်သော Curtin University Sydney နှင့် Curtin University Singapore တို့တွင် တက်ရောက်မည့် ကျောင်းသားများအတွက် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ပညာသင်ဆုနှင့် ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေး များကို မြန်မာနိုင်ငံရှိ နိုင်ငံတကာပညာရေးဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီ AT&S မှတစ်ဆင့် လျှောက်ထားရယူနိုင် ကြောင်း သိရသည်။
Curtin တက္ကသိုလ် စင်ကာပူကျောင်းခွဲ၏ ပညာသင်ဆုနှင့် ပညာသင် ထောက်ပံ့ကြေးများကို လျှောက် ထားရာ၌ အခြေခံပညာ အထက်တန်းတွင် ဘာသာရပ် ၄ ခု၏ ပျှမ်းမျှရမှတ် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် အင်္ဂလိပ်စာအမှတ် IELTS (5.5) ရရှိထားပြီးသူများ လျှောက်ထားရယူနိုင်သည်။ ၀င်ခွင့် အင်္ဂလိပ်စာ ရမှတ်မရှိသူများများသည် Curtin တက္ကသိုလ်က စစ်ဆေးသည့် အင်္ဂလိပ်စာအရည်ချင်းစစ် စာမေးပွဲကိုဖြေဆိုပြီး ပညာသင်ထောက်ပံကြေး ကို လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
၀င်ခွင့် အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်း ရမှတ်ပြည့်မီသူများသည် ဒီပလိုမာတန်းနှင့် Certification IV Tertiary Preparation Program များကို တက်ရောက်ပါက စင်ကာပူဒေါ်လာ ၃၈၀၅ နှင့်ညီမျှသော ပညာသင်ဆုကို လည်းကောင်း၊ Diploma of Arts တန်းကို လျှောက်ထားပါက စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၁၆၀ နှင့်ညီမျှသော ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးကိုလည်းကောင်း ခံစားခွင့်ရမည်ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ ဘွဲ့ရပြီးသူများသည် ဘွဲ့အမှတ်စာရင်းတွင် ပျမ်းမျှ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် IELTS (6.5) ရရှိထားပါက စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၆၈၈ နှင့်ညီမျှသော ပညာသင်ထူးချွန်ဆုကိုလည်းကောင်း၊ Curtin တက္ကသိုလ်၏ Project Management ဘာသာရပ်ကို လျှောက် ထားသူများအတွက် စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၆၈၈ နှင့်ညီမျှသော ပညာသင် ထောက်ပံ့ကြေးကိုလည်းကောင်း လျှောက်ထားနိုင်ကြမည် ဖြစ်သည်။
Curtin Singapore တွင် စာရင်းအင်းဘာသာရပ်၊ ဘဏ္ဍာရေးဘာသာရပ်၊ ဘဏ်လုပ်ငန်းဘာသာရပ်၊ စီမံခန့်ခွဲမှု ဘာသာရပ်၊ ဈေးကွက်စီးပွားရေးဘာသာရပ် စသည်တို့ကို သီး ခြားဘွဲ့ဒီဂရီများ၊ ပေါင်းစပ်ဘွဲ့ဒီဂရီများအဖြစ် ရယူနိုင်ပြီး စီးပွားရေးဆိုင်ရာ မဟာဘွဲ့ဒီဂရီများလည်း ရယူနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
Curtin စင်ကာပူကျောင်းခွဲတွင် တက်ရောက်သူများသည် သြစတြေးလျနိုင်ငံရှိ ဆစ်ဒနီနှင့် ပါတ်ခ်တက္ကသိုလ် နယ်မြေခွဲများသို့လည်း ပြောင်းရွှေ့ပညာသင်ယူနိုင်ကြောင်း သိရ သည်။
ထူးခြားချက်အနေဖြင့် သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ ဆစ်ဒနီမြို့ရှိ Curtin သို့ စီပွားရေးဆိုင်ရာ ဘွဲ့ဒဂရီအမျိုးမျိုးနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ မဟာဘွဲ့ဒီဂရီအမျိုးမျိုးဖြင့် ကျောင်းတက်ရောက်လိုသူ နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအတွက် တစ်နှစ်စာ ပညာသင်စရိတ်၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ညီမျှသော ပညာသင်ထူးချွန်ဆု ကိုလည်း ပေးအပ်သွား မည် ဖြစ်သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွက် Curtin တက္ကသိုလ် စင်ကာပူကျောင်းခွဲသို့ ကျောင်းလျှောက်လို ပါက နိုဝင်ဘာလ ကျောင်းဖွင့်ချိန်အတွက် လျှောက်ထားနိုင်ပြီး ဆစ်ဒနီသို့ အောက်တိုဘာ လ ကျောင်းခေါ်ချိန်များကို လျှောက်ထားနိုင်ကြမည် ဖြစ်သည်။
Curtin University နှင့် ပညာသင်ဆုများ၊ ပညာသင်ထောက်ပံ့ကြေးများအကြောင်း အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက AT&S Co.,Ltd. အဆောင် ၅၊ အခန်း ၄ ၊ မြန်မာအင်ဖိုတက်(ခ်) ၊ လှိုင်တက္ကသိုလ်နယ်မြေ၊ ဖုန်းနံပါတ် ၀၁-၅၂၁၁၂၅ ၊ ၀၁- ၆၅၂၂၈၈၊ ၀၁- ၆၅ ၂၃၂၀၊ ၀၉- ၅၀၆၂၁၇၁ ၊ ၀၉- ၇၉ ၉၅၉၅၉၄၉၊ ၀၉- ၇၉၅၉ ၅၃၇၈၇ တို့ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်သည်။
လူငယ်များအနေဖြင့် လူကြီးများ၏အမှားများကို သင်ခန်းစာ ယူပြီး အတွေးသစ်အမြင်သစ်များဖြင့် စိန်ခေါ်မှု အဟန့်အတား အခက်အခဲ များကို ကျော်လွှားနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ကြစေ လို
နယ်မြေတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် တပ်မတော် စစ်ကြောင်းအား AA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့က လက်နက်ကြီး၊ လက်နက်ငယ်များဖြင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်အား နိုင်ငံရေးပါတီ ၃၂ ပါတီမှ ပါတီဥက္ကဋ္ဌများ၊ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌများ လာရောက်မိတ်ဆက်တွေ့ဆုံ
ကလေးအလုပ်သမားများ လျော့နည်းပပျောက် ရန် နှစ်ရှည်စီမံချက်များချမှတ် ဆောင်ရွက်သွားရမည်
ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ်များသည် ဒေသခံများအတွက် အစိုးရ၏ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုကို အဟန့်အတားဖြစ်စေပြီး အစိုးရ၏ ပုံရိပ်ကိုကျဆင်းစေကြောင်း ရခိုင်ဝန်ကြီးချုပ်ပြော
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် ၏အထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် H.E. Mr. Hiroto IZUMI တို့တွေ့ဆုံကာ ရခိုင် အရေးနှင့်အခြားကဏ္ဍများဆွေးနွေး
မိုင်းထောင်ဖောက်ခွဲနေသည့် AA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူ များအား ဖမ်းဆီးရမိ
အပြစ်မဲ့ရွာသားတစ်ဦးအား AA အကြမ်းဖက်သောင်းကျန်းသူ အဖွဲ့က ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ရက္ခိုင့်တပ်မတော် တည်ရှိရေးသည် AA ၏ အဓိကရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည်ဟု ဆို
(၂၄) နှစ်ကြာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့သည့် မြန်မာ-တရုတ် နယ်နိမိတ် ပူးတွဲစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ရေးဆွေးနွေး